Kutheni undwendwela iMoldova ngexesha leCoronavirus? | Iindaba zeNkcubeko yokuHamba
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNkcubeko yokuHamba » Kutheni undwendwela iMoldova ngexesha leCoronavirus?
Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Iindaba zokuhamba zaseYurophu • Iindaba zokuhamba kweMoldova • omnye • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel
Kutheni undwendwela iMoldova ngexesha leCoronavirus?
Inye kuphela imeko ye-COVID-19 yimeko yangoku yeMoldova, iyenza indawo efanelekileyo yokutyelela.
IMoldova, ilizwe laseMpuma Yurophu kunye ne-republic yaseSoviet, ineendawo ezahlukeneyo kubandakanya amahlathi, iinduli ezinamatye kunye nezidiliya. Imimandla yewayini yayo ibandakanya iNistreana, eyaziwa ngokuba zii-reds, kunye neCodru, ikhaya lezona ndawo zigcina izisele zikhulu emhlabeni. ICapital Chișinău ine-Soviet-style yoyilo kunye neMyuziyam yeSizwe yezeMbali, ebonisa ubugcisa kunye nengqokelela ye-ethnographic ebonisa amakhonkco enkcubeko kunye neRomania engummelwane.
The IRiphabhlikhi yaseMoldova Iya isiba yindawo yokhenketho enomdla entliziyweni iYurophu. Yaziwa ngembali yayo etyebileyo, isithethe esihlala ixesha elide sokubuk 'iindwendwe esizibonisa ngewayini nangokutya, iMoldavia Siyazingca ukwazisa ngokusungulwa kweNdlela ezintathu zewayini njengeyona ndlela ifanelekileyo yokuhlola le ndawo.
Iindlela zewayini iMoldavia banamathele ngempumelelo kwi-ITER VITIS ROUTE, iNdlela yeNkcubeko yaseYurophu yoMdiliya kunye newayini 'Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne', ekhuthazwe yi-European Federation Iter Vitis kunye neNdlela eQinisekisiweyo yeNdlela yeKhansile iYurophu'Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne' injongo kukukhusela indidi yewayini kunye nokuqaqambisa ukwahluka kwayo kwihlabathi lehlabathi. IMoldova Umbutho wezoKhenketho ngaphakathi (UKUQALAUyazingca ngokumela iMoldavia kweli phulo kunye nokuphuhlisa amava ewayini kunye neendlela zewayini zokhenketho. Iindlela zewayini iMoldavia Ndivule i-7 eyahlukileyo yewayini kunye neendlela zohambo lwegastronomy, utyelelo olungalibalekiyo kwiivenkile ezingama-30, iingcango zewadi kunye namagumbi okungcamla, ukufikelela kwiziganeko ezili-15 zewayini, kunye namava enkcubeko ethusayo.
Iindlela zewayini iMoldavia bawela kwimimandla emithathu benikwe ubungqina bendawo ekhuselekileyo. Umbindi Indlela yeCodru PGI yeWayiniimele elona nani likhulu leevenkile zewayini, kwaye apha unokufumana abamhlophe ababalaseleyo, iirandi kunye newayini ehlwahlwazayo. Umzila weWayini ye-PGI yeTrajan isusela kwikomkhulu, Chisinau, eMzantsi-Ntshona. Eyaziwayo ngeentlobo zayo ezibomvu, iyadlula IMoldova Indawo ezizimeleyo yeGagauzia enefuthe laseTurkey kunye ne-gastronomy eyahlukeneyo. I-Stefan i-Great PGI Wine Route, eqala ngo Chisinau kwaye iyaqhubeka ukuya eMzantsi-Mpuma ikuthatha kuhambo ngeewayini ezimangalisayo, izikhumbuzo zembali kunye neendawo ezimangalisayo zokuphefumla.
Izimvo zeLonely Planet:
“Iindlela Zewayini iMoldavia uthungelwano lweendlela ezintathu, ezifikelela kwiingingqi zewayini zembali zaseCodru, eValul lui UTraian noStefan Voda. Iindlela - ziqala kwikomkhulu, Chisinau -Kwasebenza njengeenkcubeko kunye neekorido zendlela yokonwabisa ebonisa iminyhadala, iminyhadala, kunye neendawo eziphambili zomdla ezinje nge-B & Bs, iinqaba, izindlu zoonongendi, oovimba bendalo, kunye neendawo zezinto zakudala. Kubakhenkethi, olu nxibelelwano lubonelela ngohambo olucacileyo ngelixa lubhengeza ubunyani obungagunyaziswanga kunye nokucinga okungalindelekanga okuxhonywe ngaphezulu kweminyaka engama-5000 yembali yokwenza iwayini kunye nenqanaba elibalulekileyo lemveliso yewayini. ”